Dardar gelin lugu sameeynayo shaqaalaha ku shaqeeya Suuqa madoow | Somaliska
Goobaha shaqada sida maqaayadaha iyo dumaanka ayaa waxaa jira dadyow suuq madoow uga shaqeeysta, kuwaas oo siddii looga hortagi lahaa markale dar dar gelin lugu sameeynayo.
Talaabadan ayaa timid ka dib markii sanadkii ina dhaafay ee ay ciidanka booliska Iswiidhan baaritaano ku sameeyeen goobo tiro ahaan gaarayey kun goobood oo xarrumo shaqo ah, Waxaana ay boolisku sheegeen in sadex ay kor u kacday shaqaalaha suuqa madoow, marka la eeggo sanadkii ka sii horeeyey ee 2015-ta.
Per Löwenberg, waa ku simaha madax waaxeed ka tirsan ciidanka qaranka ee xuduudaha, wuxuu sheegay isagoo ka hadlayey sababta loo nisbeeynayo sare u kaca shaqaalaha suuqa madoow ay tahay iyagoo helay xog dheeri ah sida uu u sheegay idaacada Iswiidhan. Wuxuu sidoo kale sheegay in ciidanku sanadkii ina dhaafay uu helay awood dheeri ah oo ay baaritaano ku sameeyaan iyo xogaha ay heleen oo aad uga duwanaa siddii hore.
Goobaha baaritaanada lugu sameeyey sanadkii tagay ayaa ka mid ah maqaayadaha, hoteeladda iyo goobaha ganacsiga, halkaasoo ay muuqatay i dadka sida suuqa madoow ku shaqeeya ay sadex jibaar ay ka badan tahay sanadkii ka sii horeeyey ee 2015-ka. Waxeey baaritaanadoodu ciidanku ku soo qabteen dad gaaraya 232 ruux oo ah dadyow la sheegay ineey ka yimaadeen meelo ka baxsan Midowga Yurub. Kuwaas oo ah dad dalka si dhuumaaleeysi ah ku joogay ama aan laheyn sharci ku joog.
Booliska waxaa kale oo ay sheegeen in ay dul dhigeen ganaax dhan 225 000 (labbo boqol iyo labbaatan iyo shan kun) oo lacagta karoonka ah xarruumihii ay dadyowgaasi suuqa madoow ka howl gali jireen. Booliska ayaa ugu dambeyntii oo kaashanaya laanta canshuuraadka qaadista ee Skattverket ayaa qaadaya talaabo kale oo ay ku dar dar gelinayaan baaritaanadda lugu sameeynayo goobaha kor ku soo xusan iyo. Waxaana la filayaa in dowladda ay taageero ku filan siin doonto ciidanka baaraya shaqada suuqa madoow.
Dadka aan sharciga heeysan ayaa inta badan waxaa xarrumaha shaqi bixiyeyaasha ah ugu faa’iideeyntaan daruufaha adag ee xagga sharciga ka heeysta kuwaas oo ku shaqeeeleeysiiya goobahooda ganacsi, sida dukaamadda, hoteelada iyo maqaayadaha. Kuwaas oo aan laheyn xaquuq shaqo haddii ay soo wajahdo dhibaato dhanka caafimaadka ah ama dhaqaale.
Ciidanka difaaca Sweden oo doonaya soo galootiga